Maamulka gobolka Hiiraan oo ka hadlay amaanka gobolka iyo Arimo kale (Dhegayso) – Radio Daljir
Maamulka gobolka Hiiraan oo ka hadlay amaanka gobolka iyo Arimo kale (Dhegayso)
Nofeembar 1, 2012 10:49 b 0
Beledweyne Nov 1-2012-Afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan ee Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya Md Maxamed Nuur Cagajoof oo u waramay Radio Daljir ayaa ka hadlay dhacdo shalay ka dhacday duleedka Beledweyne oo uu ku dhintay taliyihiin ciidanka qalabka sida ee gobolka Hiiraan.
Cagajoof wuxuu sheegay in amaanka gobolku xiligan yahay mid wanaagsan aadna loo adkeeyey guud ahaan amaanka gobolka, sidoo kale Afhayeenka gobolka Hiiraan wuxuu beeniyey warar ay daabaceen qaar kamid ah warbaahintu oo ku aadanaa in magaalada Beledweyne lagu xiray tiro Wariyayaal ah.
Afhayeenku wuxuu sheegay inaysan jirin wariye la xiray balse uu jirey maanta shir ka dhacay xarunta maamulka gobolka kaasoo looga yeeray afar wariye oo Su’aalo laga waydiiyey qaabkii ay u baahiyeen dilkii taliyaha ee shalay ka dhacay gobolka Hiiraan.
Ugu danbayn Afhayeenku wuxuu shacabka ku dhaqan Beledweyne ugu baaqay inay kala shaqeeyaan amaanka oo aysan u dulqaadan dadka doonaya in lagu sii jiro nabadgelyo xumada wadanka ka jirtey in kabadan 22 sano.
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa kamid ah meelaha ay ugu xooga badnaayeen kooxaha Al-shabaab iyadoo dhowaan laga xoreeyey degmada Beledweyne iyo degmooyin kale oo katirsan Hiiraan, xiligan waxaa kuwada suga ciidanka Dawlada Federalka Soomaaliya, Ciidamada Amisom & kuwa Ethiopia.
Madaxweyne Faroole oo maantay dhagax-dhigay dhisme-cusub oo ay yeelanayso W/deegaanka Puntlnad.